Dawladda federaalka oo ku hawlan sidii maamul goboleed hoosyimaada ay ugu samayn lahayd gobolka Hiiraan. – Radio Daljir
Dawladda federaalka oo ku hawlan sidii maamul goboleed hoosyimaada ay ugu samayn lahayd gobolka Hiiraan.
Janaayo 26, 2012 12:00 b 0
Baladwayne,Jan 26 -Dowladda KMG ah ee Soomaaliya ayaa wada dadaalo ay ku doonayso inay maamul ugu samayso gobolka Hiiraan,kadib markii dhawaan ay ciidamo taageersan dowladda Somaliya oo garab ka helaya ciidanka Itoobiya ay gacan ku haynta magaaladaasi kala wareegeen kooxda Al-Shabaab.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Waare oo ka mid xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee kasoo jeeda gobolka Hiiraan oo waraysi siiyay Radio Daljir ayaa waxaa uu sheegay inay socdaan kulamo ay leeyihiin masuuliyiin katirsan dowladda faderaalka iyo waxgaradka gobolka Hiiraan,kulankoodunu yahay mid ku saabsan wada tashiyo la xiriira dhismaha maamulka cusub ee uu yeelanayo gobolka Hiiraan.
“Waxaa loo samaynayo dowlad goboleed ma’ahan ee waa maamul goboleed lagala tashanayo shacabka iyo masuuliyiinta dowladda ee kasoo jeeda gobolka,waana mid KMG ah oo dowladda Soomaaliya hoosyimaada oona ka madaxbanaan kuwa sheegta maamulada ee gobolkan”ayuu yiri Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Waare.
Magalaada Baladwayne ee xarunta gobolka Hiiraan oo dhowaan laga saaray kooxda Al-Shabaab,ayaa waxaa mudooyinkii ugu dambeeyay kusoo badanayay maamulo iyo madaxwaynayaal ay ku dhawaaqayeen qurba joogta gobolkaasi,waxaana inta la’ogyahay tirada maamul goboleed ee gobolkaasi looga dhawaaqay ay kala yihiin Dooxada Shabeelle,Hiiiraan State iyo maamulka Midland.
Ciidamada deegaanka Buuhoodle oo guulo ka sheegtay dagaalkii shalay kadhacay Qoriley
Inta badan suuqii degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho oo caawa gubtay.